Samsung na-achọ inweta ụlọ ọrụ iji mejupụta 10x mbugharị na ekwentị ndị na-abịanụ | Gam akporosis
Samsung na-achọ inweta ụlọ ọrụ iji mejupụta mbugharị 10x na ekwentị ndị na-abịanụ
Igwefoto anya anya bụ ụkpụrụ ma ha anaghị apụta maka isi ihe ndị ahụ, mana enwere ọtụtụ ohere maka mmụba nke ụdị dị iche iche na ngalaba a, dị ka ụfọdụ ndị China na-egosi. Isi bụ Asia ibu Oppo, nke na-adịbeghị anya ọkọnọ a Nsonaazụ mbugharị efu nke 10x Nke ahụ nwere ike ịbụ onye na-agbanwe egwuregwu maka ụlọ ọrụ igwefoto.
N'oge a, Samsung bu onye ekwuru na "okwu di elu" na nnweta nke Israel ụlọ ọrụ Corephotonics maka ọnụ ọgụgụ nke gburugburu 150-160 nde dollar, nke nwere ihe karịrị 150 patenti metụtara mbugharị na-emetụta igwefoto ama ma soro Oppo rụọ ọrụ na mmepe nke teknụzụ mbugharị 10x.
Ọ bụghị naanị igwefoto 5x na 10x. Corephotnics 'akwụkwọ ọcha na ihe ọhụrụ ha mepụtara na-ekpughe na "jikọtara ya na ọtụtụ-etiti, njikọta onyonyo na teknụzụ ọtụtụ, igwefoto a (ntọala) nwere ike ịnye ihe mbugharị nke 25x," yabụ South Korea chere maka itinye aka ya dum na achicha ahụ.
Inweta ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ ozi n'ọhịa ga-egosi n'ụzọ doro anya Samsung nwere ike ịdị oke njọ banyere ikike ntanetị nke ekwentị ya n'ọdịnihuMa ọ bụ ezie na ọ nweghị ihe gọọmentị ruo mgbe ọ dị, ọ dị mma ịsị na ọtụtụ ngwaọrụ Galaxy ga-eme n'ọdịnihu ga-adaba na mbugharị anya.
Samsung sonyeere egwuregwu 'igwefoto mbugharị' ntakịrị oge na 2017 na 8 Galaxy NoteMgbe ọtụtụ n'ime ndị asọmpi ya nwere ụfọdụ n'ime ngwaọrụ ndị ahụ na obere akpa ha, mana ọ dị ka nnukwu onye South Korea ga-apụ apụ, na ịchọta atụmatụ nke Corephotonics nwere ike inyere ya aka n'ọsọ ogwe aka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung na-achọ inweta ụlọ ọrụ iji mejupụta mbugharị 10x na ekwentị ndị na-abịanụ
Yellow Pages na-enweta nnukwu mmelite
Xiaomi na-akwadebe Mi 9 maka February site na ihe mmetụta ntanetị mkpịsị aka